puntland: Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo xafiiskiisa kula shiray guddiga abaaraha - Wargane News
Home Somali News puntland: Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo xafiiskiisa kula shiray guddiga abaaraha
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Eng.Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay guddigii abaaraha oo uu magcaabay Madaxweynaha Puntland, kuwaas oo uu guddoomiye u yahay Madaxweyne ku-xigeenka.
Kulankii uu guddigu ku yeeshay xafiiska Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda abaaraha iyo qaababkii looga hawlgeli lahaa iyadoo laga duulayo hal-kudhiggii Madaxweynaha Puntland ee ahaa Puntland haysku tashato.
Guddiga abaaraha ayaa waxay soo saareen saddex qodob oo sal looga dhigayo qaabkii loo bilaabi lahaa gurmadka abaaraha waxaana warbaahinta u akhriyey Wasiirka Warfaafinta Puntland Maxamuud Xassan Soocadde.
In la sameeyo guddi Farsmo, guddigaas oo hubin dhab ah ku samayn doona sida ay u kala baahi badan yihiin gobollada Puntland ee ay abaartu ka jirto.
In Roobdoontii la qabto maalinta khamiista ah ee soo socota 25-Feb-2016-ka sidii wasaaradda caddaaladu ay hore ugu dhawaaqday, waxaana arrintaa kawada shaqayndoona wasaaradda Caddaaladda iyo iyo Guddoomiya yaasha Gobollada Puntland.
Is abaabul loo bandhigay ganacsatada Puntland oo la doonayo ganacsatada Puntland in ay qayb libaax ka qaataan gurmadka abaaraha sidii horeba looga bartay, arrintaana waxaa kawada shaqayn doona Wasaaradda Caddaaladda iyo Rugta Ganacsiga Puntland.
Somaliland: Mujaahid Cali Gurey Oo Ku Soo Hal Qabsaday Hdaladii Cigaal “Dr Bulxan Sharciga Ayaa Meel Mariyey Inkastoo,,,,